Raikitra ny ampamoaka : «Manao asan-jiolahy koa ny mpitandro filaminana», hoy ny mpiandry fonja | NewsMada
Samy miaro ny rambony tsy ho tapaka. Nahitsy ny fanehoan-kevitry ny Sendikàn’ny mpandraharaha ny fonja (SPAPM) fa tsy afa-bela amin’ireo asan-jiolahy miseho lany etsy sy eroa koa ny mpitandro filaminana (polisy, zandary, miaramila). Na izany aza, niaiky izy ireo fa misy ihany ireo mihoa-pefy ny sasany amin’ireo mpiandry fonja.
« Raisinay ho fanalam-baraka ny filazana fa tafiditra amin’ny tsy fandriampahalemana ny mpiandry fonja. Misy tokoa ireo tafiditra amin’ny asa ratsy, saingy tsy idiran’ny fandraharahana ny fonja ankapobeny izany. Maro koa ireo mpitandro filaminana voarohirohy amin’ny heloka samihafa : fikambana-jiolahy, fanafihana mitam-piadiana, fakana an-keriny », hoy ny filohan’ny SPAPM, Realy D., omaly, teny Antanimora.
Miteny ho azy izany araka ny tarehimarika momba ireo efa voafonja nasehon’izy ireo : Zandary 35, miaramila 15 ; polisy 20 ; mpiasam-panjakana 33 ary mpiandry fonja 5.
Mbola nohamafisin’izy ireo fa voatonona ho ireo mbola misazy no manao asa ratsy. « Matetika anefa olona efa nahazo fahafahana vonjimaika na efa nahavita sazy izy ireny. Tsy ampy ny fanamarinam-baovao eo amin’ny mpitandro filaminana », hoy ihany izy ireo.
Fitaovam-piadiana avy aiza ?
Nohitrikitrihin’ity sendikà ity koa fa mampiasa basy Kalachnikov ireo jiolahy amin’ireo trangam-panafihana. « An’iza ireny ? An’ny mpiandry fonja ? Efa mankaleo ny maheno fa hoe misokatra ny fanadihadiana nefa tsy hita intsony ny tohiny avy eo », hoy ny SPAPM, tamin’ny teny hentitra.
Manoloana izany nilaza izy ireo fa tokony hatsahatra hatreo ny fanaovana tsinontsinona ireo mpiasan’ny fandraharahana ny fonja sy ny fanambaniana azy ary koa ny fitsabahana amin’ny asany. « Aty amin’ny fonja no hiafaran’ny asa eo amin’ny asa famaizana manomboka amin’ny fisamborana, fanadihadiana, ny fitsarana », hoy ihany izy ireo.
Manao antso avo amin’ny mpitondra
Nialoha izany, manaitra ny tompon’andraikitra ny SPAPM manoloana ny fotodrafitrasa manerana ny Nosy efa simba sy potika. Eo koa ny tokony hamatsiana fitaovana azy ireo, toy ny fiara. Nametra-panontaniana mihitsy aza ity sendikà ity raha mitaha amin’ny hafa. « Mahazo fitaovana isan-karazany ireo namana mpitandro filaminana nefa samy misehatra amin’ny fitandroana ny filaminana ihany. Tsy hoe malahelo ny sasany izahay fa mba mitady ny sahaza ho anay… », hoy izy ireo.
Namaranan’izy ireo izany ny filazana fa mbola milamina ny eny amin’ny fonja ka tsy taitra ny mpitondra. « Miezaka hatrany izahay mametraka ny filaminana ety », araka ny nambaran’izy ireo.
Araka izany, miseho avokoa izany rehetra izany manoloana ny « Raharaha fakana an-keriny tany Toamasina » iny. Efa niteny ny eo anivon’ny mpitsara (SMM). Tahaka izany koa mpitandro filaminana. Nahatsiaro ho voatohintohina koa ny fandraharana ny fonja. Anjaran’iza indray koa rahampitso ?